120Lbs Single Door Magnetic Mini mkpọchi na ndị na -emepụta ihe na ndị na -eweta Mortise - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Mkpọchi Magnetik > Mini Magnetik mkpọchi > 120Lbs Obere Igwe Ọdụdọ nwere Mortise Mount
120Lbs Obere Igwe Ọdụdọ nwere Mortise Mount
YM-60M bụ obere mkpọchi eletrik, emebere ya maka ihe ngosi, ọnụ ụzọ kabinet ma dị mfe ịwụnye. Enwere ike ịnweta ngwa maka ime ime, ọnụ ụzọ iko na-enweghị frame na ọnụ ụzọ warara warara. Ezubere ihe ndọta ndọta pụrụ iche.
YM-60M bụ obere mkpọchi eletrik, emebere ya maka ihe ngosi, ọnụ ụzọ kabinet ma dị mfe ịwụnye. Ngwa dị maka ọnụ ụzọ dị n'ime, ọnụ ụzọ iko enweghị frame na ọnụ ụzọ mbata wara wara. Ezubere ihe ndọta ndọta pụrụ iche.
Nnwale nnwale Collinear 60kg, 120pu.
Ezubere ndọta mgbochi mgbochi.
Kere na -enweghị Mechanical Bolt.
Mụbaa ike na -ejide, Hosing Insulative Dual.
Tags na-ekpo ọkụ: YM-60M 120Lbs Single Door Magnetic Mini Lock With Mortise Mount, ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya, ụlọ ọrụ, ahaziri, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ego, zụta ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa, nkwupụta, CE, ISO9001, Ogo
88Lbs Obere Igwe Ọdụdọ
120Lbs Obere mkpọchi magnetik
140Lbs Obere Igwe Ọdụdọ